Madheshvani : The voice of Madhesh - फोरम सरकारमा रहेसम्म एकता सम्भव छैन : सीपी सिंह (अन्तर्वार्ता)
फोरम सरकारमा रहेसम्म एकता सम्भव छैन : सीपी सिंह (अन्तर्वार्ता)
महासचिव तथा सचिवालय सदस्य राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
२०७५ साल, पुस २० गते शुक्रबार
० राजपाभित्र जहिले पनि विवादै विवाद किन देखिएको हुन्छ ?
— जीवन्त पार्टीमा छलफल हुनुलाई विवाद मानिँदैन । राजपामा ६ जना अध्यक्ष छन्, सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सतहमा विवाद देखिए पनि वास्तवमा यो चाहीँ विवाद होइन । यसलाई विवाद भन्नुभन्दा पनि यो छलफल हो । छलफलका विषयहरूलाई मिडियाले विवादको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दै आएको छ ।
० भनेपछि मिडियाले छलफलाई विवाद बनाइदिन्छ ?
— मिडियालाई त दोष दिन चाहन्न तर प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने शैली विवादकै रूपमा हुन्छ । मत मतान्तर हुन्छन्, त्यसलाई विवाद भनेर आउँछन् । त्यसैले, राजपामा कुनै पनि विवाद छैन ।
० तर, पार्टीकै शीर्ष नेताहरू मिडियामा विवादित कुराहरू ल्याउँछन् नि ?
— त्यो कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत विचार आउन सक्छ । त्यसको आधिकारिकता त संयोजक वा प्रेस विज्ञप्ति वा प्रवक्तामार्फत् आउँछ नि ।
० संयोजक परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि अहिले पनि यथावतै छ नि ?
— अहिले असन्तुष्टि छैन । संयोजक परिवर्तनप्रति अध्यक्षमण्डलका एक जना सदस्यको मतान्तर थियो । विधानअनुसार नै चक्रीय प्रणालीबाट संयोजक परिवर्तन गरिएको हो । यसमा बहुमत र अल्पमतको कुरा आउँदैन ।
० तर, अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूको सर्वसहमतिबाट चक्रीय प्रणालीअनुसार संयोजक परिवर्तन गर्ने भनिएको छ नि ?
— चक्रीय प्रणाली पनि छ र सहमतीय पनि छ । सबैको सहमतिमा हुनुपर्ने हो । चक्रीय प्रणालीलाई निर्णय गर्दा सहमतिमा हुनुपर्छ । तर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । विधानमा दुई–दुई महिनामा परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा छ । पूर्वसंयोजक महन्थ ठाकुरज्यूलाई नै निरन्तरता दिइएको थियो । उहाँको अस्वस्थताका कारणले महाधिवेशनका धेरै कामहरू अगाडि नबढिरहेको अवस्थामा संयोजक परिवर्तन गरिएको हो । बैठकमा अनिल झाज्यू पनि उपस्थित भइरहनुभएको छ । त्यसैले कुनै निर्णय गर्दा विमति हुनसक्छ तर सहमतीय प्रणालीमै गइरहेको छ ।
० अध्यक्षमण्डलको बैठकमा अनिल झा किन अनुपस्थित हुनुभयो त ?
— अध्यक्षमण्डलको बैठकबाट भएका निर्णयहरूमा उहाँको सहमति नै रहेको छ । जिल्लामा पर्यवेक्षकहरू तोकिएका छन्, त्यसमा उहाँले पनि आफ्ना तर्फबाट नामहरू दिनुभएको छ । उहाँको सहमतिअनुसार कामहरू अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले व्यवहारमा त विमति देखिएको छैन ।
० तर, बैठकमा किन जानुभएन ?
— त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरो हो, हामीलाई थाहा हुन सकेन ।
० प्रदेश २ मा पनि राजपाभित्र विवादका विभिन्न कुरा आउँदैछ, के हो त्यो ?
— त्यस्तो खासै विवाद छैन । कसैको विमति होला । ६ वटा पार्टी जसरी एक भयो तर ती सबै पार्टीका नेताहरूको मन मिलिसकेको छैन । अहिले पनि पार्टीमा ६ वटा गुटजस्तै देखिन्छ । तर, महाधिवेशनसम्म यस्तो चलिरहन्छ । महाधिवेशनपश्चात् मात्र एउटा सिङ्गो पार्टीको रूप लिन्छ । त्यसैले मन मिलाउन हामीलाई पनि गाह्रो महसुस भइरहेको छ । तर, पार्टी नै टुक्रिने गरी विवाद छैन । जो मान्छे अनुशासनहीन काम गरेका छन्, तिनीहरूलाई कारबाही हुन्छ । धनुषामा अध्यक्षमण्डलका सदस्य परिवर्तन गर्दा केन्द्रीय संयोजक राजेन्द्र महतोको पुतला जलाइयो । त्यस्तालाई अनुशासनहीनताको कारबाही हुन्छ । हिजोसम्म पार्टी त्यति सक्रियरूपमा चलिरहेको थिएन, अहिले द्रूतगतिमा कामकारबाही अगाडि बढाइरहेको छ ।
० धनुषा जिल्लामा अध्यक्षमण्डलका सदस्यबाट एउटालाई हटाएर अर्को ल्याउनुपर्ने कारण के ?
— जुन व्यक्तिलाई अध्यक्षमण्डलको सदस्यबाट हटाइयो उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थेन । अधिवेशन गर्नुपर्नेछ । उहाँ बैठकहरूमा नआउने लगायतका कारणले उहाँलाई हटाएर एउटा सक्रिया युवा नेतालाई नियुक्त गरिएको हो । यो निर्णयलाई विरोध गरेर जो जसले संयोजकको पुतला जलाए उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ ।
० संयोजक राजेन्द्र महतोको समय सकिन लागेको छ, अब आगामी महिनामा अर्को संयोजक आउनुहुन्छ ?
— चक्रिय प्रणालीअनुसार दुई÷दुई महिनामा संयोजक परिवर्तन हुन्छ । हामीले विधानलाई कार्यान्वयन गरेका हौं । त्यसैले स्वतः केन्द्र र जिल्लामा संयोजक परिवर्तन हुँदै जान्छ ।
० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राजपासँग एक साताको समय माग्नुभएको थियो, त्यो अवधि पनि सक्यो तर प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । अब राजपाको रणनीति के हुने ?
— सात दिनको सयम त सकिएको छ तर, आगामी रणनीतिबारे अध्यक्षमण्डलको बैठकमा छलफल हुन्छ । आगामी बैठकबाट सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय हुनसक्छ ।
० समर्थन फिर्ता लिएर के गर्ने ?
— हामी समर्थन गरेपनि प्रतिपक्षकै बेन्चमा बसिरहेका छौं । तर अब पूर्णरूपेण प्रतिपक्ष हुन्छौं । लाभको पदमा हाम्रो पार्टीका कोही नेताहरू हुनुहुन्न । हाम्रा मुद्दा सम्बोधनका निम्ति यो सरकारलाई समर्थन छ । हामीसँग विकल्प थिएन । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई चाहिन्छ, जो नेकपासँग मात्र सम्भव छ । नेकपाका नेताहरूले संविधान संशोधन लगायत हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । त्यसैले तत्कालीन अवस्थामा समर्थन गरिएको थियो ।
० तपाइँहरूको समर्थन फिर्ताले यो सरकारलाई के फरक पार्ला र ?
— दुई तिहाईको सरकार भएपनि धेरै फरक पर्छ । हाम्रो समर्थन फिर्ताले यो सरकारमाथि ठूलो नैतिक दबाब पर्छ । राजपाले समर्थन फिर्ता लिनु भनेको पूरै मधेशका जिल्लामा यसको असर पर्छ । मनोवैज्ञानिक असर पर्छ ।
० समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन पनि घोषणा गर्ने कि ?
— हामी समर्थन फिर्ता लिएर सडक र सदनबाट संघर्ष गर्ने हो । सांसद रेशमलाल चौधरीलाई रिहाई गरिएन भने, मुद्दा फिर्ता भएन भने थारू समुदायहरू पनि आक्रोशित देखिएका छन् । उनीहरू हामीलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर हामीले अहिलेसम्म उनीहरूलाई रोकेर राखेका छौं । सडक संघर्ष गर्दा धेरै विचार गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो महाधिवेशन पनि आइरहेकोले र हाम्रा मुद्दाहरू पनि जीवित राख्नुपर्ने भएकोले अहिले संघर्षको विकल्प छैन ।
० भनेपछि सडक संघर्ष पनि हुन्छ ?
— सडक संघर्षको स्वरूप कस्तो हुने त्यो अहिले नै भन्न सकिँदैन । सडक जाम गर्ने, नेपाल बन्द गर्ने लगायत हुन्छ भन्न सकिन्न तर यसका अन्य विकल्पहरू पनि छन् । सडक संघर्षकै पनि धेरै तरिकाहरू छन् ।
० प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उहाँले राजपालाई प्रदेश २ को सरकारबाट हटाउने चेतावनी दिएको पनि सुनिन्छ, के छ वास्तविकता ?
— यो विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । यो बाहिरी हल्ला मात्र हो । हामी त कहिल्यै पनि सत्ताको लोभमा परेका छैनौं नि । प्रदेश २ मा हाम्रो साझेदारी नेकपासँग होइन, फोरमसँग हो । फोरमसँग हाम्रो साझेदारी कायमै छ । फोरम र राजपाबीच पार्टी एकीकरणका लागि त फोरमले एउटा समिति पनि बनाएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक डकुमेन्ट आएको छैन । आधिकारिक कुरा आएपछि एकीकरणतर्फ जाने राजपाको सोच छ । केन्द्रको समर्थन फिर्ताले प्रदेश २ को सत्ता समीकरणमा कुनै फरक पर्दैन ।
० नेकपा प्रदेश २ मा जसरी सबभन्दा ठूलो दल छ, केन्द्रमा उसकै सरकारमा तपाइँहरूको सत्ता साझेदार फोरम पनि सहभागी छ नि ?
— यस्ता कुनै कुराहरू छैन । कसैले यो पनि तर्क गर्छन् कि नेकपा र फोरमले प्रदेश २ मा पनि सरकार बनाउँछ रे । तर, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । प्रदेश २ मा राजपा र फोरमको गठबन्धन अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म कायमै रहनेछ । यसमा दुवै पार्टी दृढ छ ।
० फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजपाभित्र खुट्टा तानतानको अवस्थाले एकीकरणको प्रक्रिया नबढेको भन्नुभएको छ नि ?
— यो उहाँको व्यक्तिगत धारणा हुनसक्छ । उहाँले एकताका लागि समिति गठन गर्नुभयो तर आधिकारिकरूपमा आउनुप¥यो नि । हामी पनि एकताका लागि सकारात्मक छौं । राजपामा खुट्टा तानातानको अवस्था छैन । ६ जना अध्यक्ष भएपछि विभिन्न किसिमका विचारहरू आउनु स्वाभाविक हो । फोरमसँग एकीकरण हुने सम्भावना प्रवल छ ।
० फोरम सरकारमा छ, तपाइँहरू समर्थन फिर्ता लिने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । कसरी मुद्दा मिल्छ ?
— यदि संविधान संशोधन भएन भने फोरम पनि सरकारबाट बाहिर आउनुपर्छ । फिर्ता भएपछि त एकीकरण हुनसक्छ । जब एकीकरणको कुरा आयो भने फिर्ता हुनैपर्ने हुन्छ । जब फोरम सरकारबाट बाहिर आउँदैन तबसम्म एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । तर, यी सबै कुराहरू अहिले अनौपचारिक भइरहेको छ । एकीकरणका लागि औपचारिक गतिविधि केही पनि सुरू भएको छैन । तर, संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढिरहेको अवस्थामा फोरम पनि सरकारमा बसिरहनुको कुनै औचित्य रहँदैन । किनभने संविधान संशोधनका लागि नेकपासँग सहमति गरेर सरकारमा गएको हो । संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सात दिनको समय पनि प्रधानमन्त्रीले माग्नु भएको हो तर प्रक्रिया सुरू भएको छैन । त्यसैले फोरम अब नैतिकताको आधारमा सरकारबाट बाहिर आउनुपर्छ ।
० प्रधानमन्त्रीले त राजपासँग सात दिनको समय माग्नुभएको थियो नि ?
— संविधान संशोधन फोरम र राजपाका लागि छुट्टाछुट्टै मुद्दा होइन । यो नेपालको संविधान संशोधन गर्ने हो । संशोधनका मुद्दामा राजपा र फोरमको धेरै फरक मत छैन । त्यसैले, अहिलेसम्म प्रक्रिया सुरू नभएकाले फोरम सरकारमा बसिरहनुको कुनै औचित्य छैन ।
० तर, फोरमले संशोधनका लागि कुनै समयसीमा तोकेर यो सरकारमा गएको होइन नि ?
— त्यसो हो भने फोरमसँग एकीकरण हुँदैन । जब संशोधनको प्रक्रिया सुरू गर्न सात दिनको समय मागेर केही भएन भने संशोधन हुने कुनै छाँटकाँट नै देखिँदैन । प्रधानमन्त्री आफैले सात दिनको समय माग्नुभएको थियो ।